ကယားပြည်နယ် ရှားတောမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ရှားတောမြို့ဈေးတန်းရှိကုန်စုံဆိုင် (၁၅)ဆိုင်အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (၈.၁၂. ၂၀၂၀) - Food and Drug Administration, Myanmar
ကယားပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းများသည် ရှားတောမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ (၈.၁၂. ၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ရှားတောမြို့ဈေးတန်းရှိကုန်စုံဆိုင် (၁၅)ဆိုင်အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ သံသယရှိသော အစားအသောက်များအား နမူနာကောက်ယူ၍ Mobile Laboratory (Test Kit only) ဖြင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာ ခွင့်မပြုဓာတုပစ္စည်းများ သုံးစွဲထားခြင်းကိုမတွေ့ရှိခဲ့ရပါ။ ၎င်းကုန်စုံဆိုင်များတွင်တားမြစ်အစားအသောက်နှင့် သက်တမ်းလွန်အစားအ​သောက်များတွေ့ရှိခဲ့ပါသဖြင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အဆိုပါအစားအသောက်များအားသိမ်းဆည်းဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဥ် ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်များနှင့်ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များအား အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲခွင့်မပြုဓာတုပစ္စည်းများ၊ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများနှင့် တားမြစ်အစားအသောက်များ/အလှကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာပေးခဲ့ပါသည်။
← (၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူနိုင်သော အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်(အသစ်)များ
ကရင်ပြည်နယ် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန သည် ကော့ကရိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ဆေးဆိုင်များအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် ဆေးဝါးနမူနာများ ဝယ်ယူခြင်း (၁၁-၁၂-၂၀၂၀) →